E wepụtala macOS Sierra 10.12.6 beta 3 | Esi m mac
MacOS Sierra 10.12.6 beta 3 eweputala
N'ehihie Betas ụnyaahụ. Na ụkpụrụ na mgbe izu mara mma nke WWDC ihe niile na-alaghachi na nke a na usoro a anyị na-agbakwunye mmalite nke ụdị beta nke sistemụ macOS dị ugbu a. Na nke a anyị nọ n'ihu nke atọ beta mbipute nke MacOS Sierra 10.12.6 na ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọhụụ ọ ga-abụ ụdị ọhụụ kachasị adị tupu mwepụta nke ọhụrụ macOS High Sierra operating system. Versionsdị beta nke iOS, watchOS na tvOS abịala.
Na nke a na ọbịbịa nke nke atọ beta Ọ bụghị na anyị na-ahụ ọtụtụ mgbanwe, anyị nwere ụdị nsogbu ndozi ahụhụ, nchọpụta nsogbu na mmelite na nkwụsi ike sistemụ. N'ezie ụdị nsụgharị beta ndị a na-ahapụ n'ọnọdụ zuru oke ihe ga-abụ ochie macOS n'oge na-adịghị anya.
Dịka ọ dị na mbụ, ọ ka mma ịpụ na ụdị beta ndị a ma ọ bụrụ na ị bụghị onye nrụpụta, ebe anyị nwere ike ịnwe ụfọdụ nsogbu ndakọrịta na ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ ọrụ na anyị na-eji na kọmputa. Betadị beta a tọhapụrụ na-abụkarị nkwụsi ike ma ruo ugbu a, ha egosighi njehie nke na-emetụta arụmọrụ nke sistemụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, mana anyị agaghị echefu na ha bụ nsụgharị beta ma ọ ka mma ịkpachara anya na ha. N'okwu a, anyị nwere nsụgharị beta nke ọ kachasị mma ichere ka ahapụ ha ka ị wụnye ha na Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » MacOS Sierra 10.12.6 beta 3 eweputala
Peeji, Ọnụ Ọgụgụ na Isi Okwu a na-emelite na nnukwu ndozi
Apple weputara beta nke ato nke watchOS na tvOS